Izindaba - EGuangzhou Design Week nase-Stone Fair kulo nyaka, sithathe into ethola ukuheha okuningi. Izimboni eziningi ziyajabula ngamatshe asetshenzisiwe.
Okuzenzakalelayo Glass Cutting Machine
Glass Edge Ukugaya Machine
Okuzenzakalelayo Glass Iyalayisha Machine
EGuangzhou Design Week nase-Stone Fair kulo nyaka, sithathe into ethola ukudonsa okuningi. Izimboni eziningi ziyajabula ngamatshe asetshenzisiwe.
Liyini itshe le-sintered? Yindawo eyenziwe ngomuntu eyenziwe nge-ultra compact eyenzelwe ukuqina. Sekuyiminyaka embalwa manje, ngakho-ke uma ungakakhi ngayo, kungenzeka ube maduzane. Kunoma ikuphi, uzofuna ukufunda ukusika itshe le-sintered ngendlela efanele. Ngamakhono akho engcweti namathuluzi afanele, uzothola okuningi kulokhu okubalulekile.
Okwenza itshe le-sintered libe yinto enhle kangako ukuqina nokuguquguquka kwalo. Itshe eliSintiwe lisetshenziselwa ukuhlala nokuhweba, ngaphakathi nangaphandle ngisho nefenisha. Futhi sekuyisikhathi eside ngokwanele ukuthi ukukhetha umbala nokuthungwa kuthuthukiswe kahle kakhulu. Izitolo emhlabeni jikelele zidayisa i-sintered stone furnature, futhi zifaka amatafula amatshe asetshenzisiwe, phansi, izindonga, nokugqokiswa kwangaphandle kwezakhiwo.
Izinselelo Zetshe Eliwucwenga
Izici ezihlukile zamatshe asetshenzisiwe zingenza kube ngesinye sezilayidi ezingathetheleli ukusika.
Isibonelo, amanye ama-slabs anephethini ephrintiwe ngaphezulu. Noma imaphi ama-chips noma ukungapheleli kulezi kungonakalisa ukubukeka ngemuva kokuncishiswa komphetho. Ngokunye okwenziwe ngamatshe okwenziwe ngamatshe afana ne-Neolith anemiklamo esebenza nge-slab, usazofuna ukusikeka okuqonde ngqo ukwenza umkhiqizo wakho ophelile ubukeke umuhle kakhulu.
Uma uthola ukusikeka kahle, ikhwalithi yomsebenzi wakho ophelile izoba phezulu. Uzoba nawo wonke umsebenzi kuzinto ezi-sintered ongaziphatha. Kutholakale kungalungile futhi uzokwenza noma yini edingekayo ukugwema okubalulekile emisebenzini yesikhathi esizayo.
Noma ngabe unomshini wokusika ibhuloho noma ithuluzi lokusika umshini wamanzi, kepha ijubane lokusika lihamba kancane, ukusebenza kahle okuphansi, ukusika ukusetshenziswa kwempahla, ngakho-ke izindleko zokucubungula ziphakeme kakhulu.
Ungayisika kanjani iSintered Stone ngokushesha okukhulu nangezindleko eziphansi
Impumelelo kulokhu okubalulekile ilula: iqonde futhi emise ukusika.
Kuhlanzeke kakhulu iqonde futhi ukusikeka okwenziwekufanele ube semiphumeleni esezingeni eliphakeme ekutholela ukuthunyelwa. Ukuze uthole ukusikeka okunembile udinga imishini efanele. Uma usuvele unomshini wokusika itshe othomathikhi ozenzakalelayo, usethe. Uma ungacabangi ukutshala imali kwenye. Ngokunemba high sintered itshe ahlabayo umshini sika futhi ukuqina kungalingani. Ijubane lokusika lifinyelela kumamitha ayi-180 ngomzuzu, Senze ukuhlolwa okubanzi komshini wethu ezintweni ezenziwe ngamatshe sintered. Siyaqiniseka ukuthi uzothola imiphumela emihle efanayo amakhasimende ethu ayithola ngaphesheya kweChina.
Ingilazi yokwakha, ingilazi yemoto, ingilazi yefenisha, ingilazi yezobuciko, ingilazi yokuhlobisa, ingilazi yekhabethe, ingilazi engenalutho, isibuko esisikiwe